Madaxweyne Farmaajo ”Danta Dalka iyo Dadka Waa Dowlad Dhexe oo Xoog Badan…” - Latest News Updates
Madaxweyne Farmaajo ”Danta Dalka iyo Dadka Waa Dowlad Dhexe oo Xoog Badan…”
Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in danta dalka ay ku jirto in la helo dowlad dhexe oo adag, si dalka ay u difaacdo; si uu taas u hirgeliyo wuxuu doortay inuu xoog iyo xeeladba ku tuuro inta amarkiisa diidda, kuna beddelo kuwo uu riixo, oo baari u noqda.
Kaba soo qaad in uu ku guuleysto in maamul walba uu madax uga dhigo qof uu geystay, erey madaxweyne Farmaajo ka soo baxayna aan diidin. Sidaas ma waxay ka dhigan tahay in la helay dowlad dhexe oo xoog leh?
February 8, 2021 haddii ay Soomaali doorato qof ka soo horjeeda siyaasadaha maamulka hadda jira, raggii madaxweyne Farmaajo baariga u ahaa, ma waxay taabici u noqon doonnaan mid walba oo yimaada, mise saaxiibkooda oo markaas mucaarad ah ayay difaacayaan, oo isbahaysiga GIDG ayay soo noolaynayaan?
Qofka u heysta in madaxweyne Farmaajo uu saxayo nidaam federaal qaldanaa, isku faham ma nihin..
Federaal waxaa sammeeyay sharci, Banaadir waxaa federaal la’aan dhigay sharci, haddii qaab waara la doonayo in federaalka qoqobka ah loo xalliyo, xoogga waxaa barbar socon lahaa sixid sharci…
Hadda waxay u muuqataa olole siyaasadeed oo is beddelka 2021 lagu jabsan doonno!
Wuxuu abuurayaa tiirarkii uu u noqon lahaa madaxweyne dhexe oo xooggan, ee ma abuurayo tiirar ka dhigaya madaxweynayaasha ka dambeeya kuwo xooggan!
Haddii sharci wax lagu sixi waayo, waxaa dhici doonta in uu abuurmo dhaqan madaxweyne walba halkii uu waxqabad la immaan lahaa, in uu waqtigiisa ku dhammaysto siibita maamuladii uu dhisay kii ka horeeyay!
Hadsan Adam Hosow